computer hardware နှင့်ပတ်သက်သည့် အတွေ့အကြုံများကို ရေးသားထားတာပါ. ဦးဇော်လင်းရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်ကလေး တစ်အုပ်ပါ. ဖတ်ထားသင့်တဲ့ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ပါ . ကွန်ပျူတာသမားလို့မှ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ခံယူထားရင်တော့ အရာရာတိုင်းကို လေ့လာထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ် .အရင်က တင်ပေးခဲ့ဖူး တယ်ထင်ပါတယ် . ဒါပေမယ့် Download link တွေ သေနေလောက်ပြီထင်လို့ ထပ်တင်ပေး လိုက်တာပါ . .လိုချင်ရင် အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ ..